Sarkaal Sare Oo ka Tirsan FBI Maraykanka Oo Shaqada Looga Eryay Fariin Lid ku ah Trump Oo Uu Diray. | Awdalmedia.com
Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka Maraykanka ee FBI ayaa shaqadii laga eryay kadib markii sida la sheegay uu qof ay wada shaqeeyaan u direy fariin lid ku ah Trump sanadkii 2016-kii, xilligaas oo uu socday ololihii doorashada madaxweynenimada dalkaas.
Peter Strzok ayaa lagu eedeeyay in uu isku dayay in uu Trump ka hor istaago guusha, wuxuuna ka midyahay dadka uu Trump tusaalaha ugu soo qaatay in ay ka eexdeen ee ka tirsan hay'addana saamaynta badan.
Arrinta xasaasiga ah ayaa ahayd in ninkan uu qeyb ka ahaa baaritaankii FBI-da ee ku saabsanaa fadeexada faragalinta Ruushka ee doorashada iyo waliba baaritaankii kale ee ku saabsanaa emailada Hillary Clinton.
Garyaqaanka Strzok ayaa sheegay in ku xigeenka agaasimaha FBI-da David Bowdich uu bixiyay amarka ah in uu shaqada ka tago maalinkii jimcaha.
Waxa uu sheegay in shaqo ka eryidda sarkaalkan ay khilaafsantahay go'aan guddiga anshaxmarinta ee FBI uu gaaray oo ahaa in hoos loo dalacsiiyo, 60 maalmoodna shaqada laga joojiyo.
Afhayeen u hadlay FBI-da ayaa sheegay in aysan ka hadli doonin hadda arrinka Mr Strzok.
Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in shaqada laga eryay Mr Strzok, wuxuuna is weeydiiyay goorta baaritaanka Robert Mueller uu soo afjarmi doono.
Sidoo kale Trump ayaa ku baaqay in dib loo furo baaritaankii Hillary Clinton, isaga oo sheegay in uu ahaa mid ku dhisan eex, qiyaamana ku ah dadka Maraykanka.
Mr Strzok ayaa fariin qoraaleed u diray haweenay garyaqaanad u ahayd FBI-da Lisa Page, isaga oo u sheegay in Trump uusan waligiis madaxweyne noqon doonin, balse Trump ayaa labadoodaba ku sheegay mucaashaqiin FBI-da, wuxuuna ku tilmaamay kuwa guuldaraystay.
Mr Strzok ayaa bishii hore lagu maraanmaray dhagaysi uu sameeyay guddi ka tirsan Aqalka Congress-ka, isaga oo beeniyay in wax eex ah uusan samaynin xilligii uu shaqadiisa gudanayay.
Muddo 21 sano ah ayuu kasoo shaqaynayay FBI-da, waana rug caddaa taqasus badan u leh shaqada.
Sida uu qabo sharciga FBI-da, dadka la shaqeeya waa ay muujin karaan fikirkooda siyaasadeed si shaqsi ah, mise la hubo in fariimaha uu ka diray taleefoonada shaqada.
Sikastaba ha ahaatee waa qofkii sadexaad oo heer sare ka joogay FBI-da, kuna lug lahaa baaritaanka Ruushka iyo kii Clinton ee shaqada laga eryo tan iyo intii uu Trump qabtay xilka.